I-AMP iplagi-ngaphakathi kunye nomsebenzi we-AMP osebenza kuluhlu- XH
flash_auto Yenza amaphepha e-AMP
I-AMP iplagi-in kunye nomsebenzi we-AMP osebenza kuluhlu
(Yenziwe yangasebenza okwethutyana !!)
I-Accelerated-Mobile-Pages (AMP) ijeneretha yokudala amaphepha e-AMP kaGoogle , iiplagi ze-AMP kunye ne- AMPHTML i-tag generator isebenzisa umsebenzi woluhlu oluphilayo lwe-AMP kwaye ivule ngokuzenzekelayo ukuhlaziywa kwedatha ephilayo kwi-Side nganye ye-AMP eyenziwe.
<amp- uluhlu lokuphila> Uluhlu lokudibanisa
Ukukhawulezisa uMenzi wamaphepha eMfonomfono kudala ngokuzenzekelayo inguqulelo ye-AMP kunye nomsebenzi wokuhlaziya inqaku ngokuzenzekelayo usebenzisa ithegi ye- <amp-live-list>. Ngale ndlela, zonke iisayithi ze-AMP zinohlobo lweblog esebenzayo.
Ukuba umsebenzisi ujonga uguqulelo lwewebhusayithi ye-AMP kwaye kukho izinto ezintsha zeli phepha le-AMP okwangoku, iphepha le-AMP liyaqonda ukuba inguqulelo entsha, ehlaziyiweyo iyafumaneka.
Iphepha le-AMP lazisa umsebenzisi ngohlaziyo lwenqaku ngelixa ufunda, ngaphandle kokuba umsebenzisi aphinde alayishe iphepha le-AMP!
Iqhosha liyaboniswa kumsebenzisi ukulungiselela le njongo. Ukuba umsebenzisi ucofa iqhosha lokuhlaziya inqaku le-AMP, inguqulelo entsha ye-AMP ilayisha kwangoko kwisantya esiqhelekileyo se-AMP! Oku kunika amandla amaxesha amafutshane okulayisha kunokuphinda ulayishe okupheleleyo kwaye kuhlala kugcina umsebenzisi esexesheni.
Ukukhawulezisa uMenzi wamaphepha eselfowuni kwenza iphepha le-AMP elithumela isicelo kwiseva yephepha le-AMP (umz.Iseva kaGoogle) qho ngemizuzwana eli-16 kwaye ujonge ukuba ingaba inqaku elitsha liyafumaneka na. Ukuba kukho inqaku elitsha, iphepha le-AMP libonisa umsebenzisi isaziso sokuhlaziya i-AMP ngohlobo lweqhosha lokuhlaziya inqaku.